ညီလင်းသစ်: သားကလေးရဲ့ဒုတိယ ပြက္ခဒိန်
Posted by ညီလင်းသစ် au 29.8.09
သြော်..သားလေး(၂)နှစ်ပြည့်ပြီပဲ။ အခုမှတွေ့ မိတယ်။
အာဖရိကန် အဖိုးကြီးပြောခဲ့တာမှန်လိုက်တာနော်(ကိုညီလင်းသစ်ကို မြင်ဖူးချင်ယောင်ဆောင်၍)။ အနောက်တိုင်းသားလေးနဲ့ တော့ ပိုတူသလားပဲ။ ချစ်စရာကောင်းတာကတော့ သေချာပါတယ်။
ဆရာမင်းလူ ပြောသွားတဲ့အဆိုကို သဘောကျ မှတ်သားလိုက်ပါပြီ ကျေးဇူးပါ ညီလင်းသစ်
လိုချင်တာမရခဲ့ပါဘူး...၂ နှစ်မပြောနဲ့ ကျမသမီး ၈ နှစ်ရှိနေတာတောင် အချိန်တွေက မြန်လွန်းလို့ မနေ့တနေ့ကလိုဘဲ ထင်နေတုန်းပါ...အနာဂါတ်ကို တွေးပြီးမျှော်နေရင် ရှည်ကြာနေတတ်တာမို့ (မောလည်းမောတယ်လေ ) အတိတ်ကိုဘဲ ပြန်စဉ်းစားမိတော့တယ်...
သားလေးရဲ့  ပထမဆုံးပုံလေးက အလှဆုံးပါဘဲ.ကျန်တဲ့ပုံတွေလည်း ကောင်းပါတယ်...
ဝေါ ပေပါ ထုတ်ထားရင်တော်တော်ကောင်းမယ်နော်...
အဲပုံလေးကအရမ်းချစ်စရာကောင်းသလို ထိုင်နေပုံလေးက လူကြီးလေးကျနေတာဘဲ...အသဲယားပါဘိ...
့်သားလေးရဲ့  ဘ၀တလျောက်လုံး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများနဲ့သာ တွေ့ကြုံဆုံဆည်းရပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျက်....( သားလေးအဖော်ရသွားအောင် နောက်သမီးလေးတယောက် ထပ်ယူပါဦး...)
သားလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ အိမ်မှာ ပြင်သစ်စကားပဲပြောလား။ သူဗမာစကားရော နားလည်နေပြီလား။ ကိုညီလင်းသစ်ရေ..လူလေး၂က အဖေနဲ့တူပုံရတယ်။ ၁နဲ့၃ကတော့ အမေတူပုံပဲ။ ကလေးက ငယ်သေးတယ်၊ ရုပ်ပြောင်းဦးမှာပါ။ ကလေးတိုင်းဟာ သူ့မိဘတိုင်းအတွက် သီးခြားပုံဆောင်မှုဆိုတဲ့ စကားလေးတော့ သိပ်သဘောကျသွားတယ်။
ကျနော်ငယ်ငယ်က အကြောင်းလေးတွေးမိသွားတယ်။ ကျနော်ငယ်ငယ်က ကိုယ်ဝန်သည်တွေကိုတွေ့ရင် ဘာလေးမွေးမယ် ပြောတတ်တယ်တဲ့။ ပြောသမျှမှန်တာမို့ လာမေးကြတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ သူတို့ မွေးပြီးသွားရင် ကျနော့ကို တခုတ်တရ မုန့်ခေါ်ကျွေးကြတယ်။ ဘယ်လိုလဲတော့ မပြောတတ်ဘူး များသောအားဖြင့် ခံစားချက်တစ်ခုနဲ့ဆိုင်သလားပဲ။ အင်းစေ့ဆော်မှု တစ်ခုဆိုပါတော့။
နှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ နောက် သားကောင်းရတနာ ဖြစ်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
လိမ်မာ ထူးချွန်တဲ့ သားလေးအဖြစ် အသက်ရှည် အနာမဲ့ ဒီမိဘနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နှစ်များစွာ တိုင်ပါစေ...
ကျေးဇူးပါ မယုဝရီရေ...၊ သားကတော့ အဖေနဲ့တူလိုက် အမေနဲ့ တူလိုက်ပါပဲဗျာ...။ :)
မ MieMie ကိုလည်း ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ၊ ကျနော်မှတ်ထား မိတာ အမရဲ့ကလေးက သားလေးများလား-လို့?? ဘဝ ဆိုတာ တခါတခါ ကားမောင်းရသလိုပါပဲဗျာ၊ ရှေ့လေကာမှန်ကိုပဲ တချိန်လုံး ကြည့်နေလို့မရသလို နောက်ကြည့်မှန်၊ ဘေးကြည့်မှန် အားလုံးကို မျှကြည့် နေရတာပါပဲ..၊
မမိုးရေ...သားကတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပြင်သစ်လို ပိုအပြောများလာပါတယ်၊ ဒါကလည်း သဘာဝကျပါ တယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျနော်နဲ့တော့ မြန်မာလို ပြန်ပြောနေ တုန်းပဲ၊ ရုပ်ကတော့ တခြားကလေးတွေလို တချိန်လုံး ပြောင်းနေတာပါပဲ၊
ကိုဝိုင်တီယူ အခုကြီးလာတော့ကော...ရထားစီးရင်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်သည်တွေကို ကြိုဟောတုန်းလားဗျ? :D ဆုတောင်း အတွက် ကျေးဇူးပါဗျာ...။
သားလေးက တကယ့် လူချောလေးပဲ။း)
အာဘွား သားရေ ငါတော့ မင်းပုံတွေ လာလာကြည်ပြီး တော်တော် ဒွတ်ခရောက်နေပြီဟ ခလေးလိုချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်လာလို့ မြန်မြန်ပြန်မှပဲး)
ညီ့ရဲ့ ကွန်မန့်လေး သဘောကျလွန်းလို့ ထိုင်ရီနေရ တယ်ဗျ..၊ အချိန်တန်တော့ နပိန်ကန်မှာပေါ့ ညီရာ..နော။
တော်တော် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားလေး
သူများကွန်မန့်တွေ ဖတ်ပြီး ဟယ်..အဖေ တူတာတော့..ဟယ် အမေတူတာတော့ လို့ သံယောင်လိုက်နေမိတယ်..ဟီးးး
( ကိုယ် လဲ ဘာမှ မကြည့်တတ်....ကိုညီလင်းသစ်ကိုလဲ မမြင်ဖူး)
လောလောဆယ် သိတာတော့ အဲ့ အသည်းယားစရာလေးကို အာဘွားပေးချင်တာပဲ သိတယ် :D
မောင်မျိုး ကွန်မန့် ဖတ်ပြီးရယ်ရသေးတယ်..
သူသူ ကတော့ အဲလို ဟုတ်ဝူးးနော်... :P